Serie A Oo Maanta Bilaabanaya: Hal Talaabo Ayay Hore U Qaadeen, Labo Talaabana Dib Ayay U Dhaceen. - jornalizem
Serie A Oo Maanta Bilaabanaya: Hal Talaabo Ayay Hore U Qaadeen, Labo Talaabana Dib Ayay U Dhaceen.
Serie A ayaa u muuqatay inay talaabo yar hore u qaaday xilli ciyaareedkii hore markii Juventus iyo AC Milan ay si aad isagu dhow ay ugu tartameen hanashada horyaalka, iyadoo Juve ay sidoo kale xilli ciyaareedkii hore noqotay kooxdii ugu horeysay ee Serie A ee yeelata garoon u gaar ah.
Lakiin wixii intaas ka danbeeyay, Serie A waxa ay dib u dhaceen labo talaabo oo waa weyn iyadoo tababaraha Juventus Antonio Conte uu ka mid yahay kuwa muddo dheer laga mamnuucay garoomada ka dib fadeexadii sharadka, halka bixitaankii Zlatan Ibrahimovic ay keentay in horyaalka uu soo jiidan waayo ciyaaryahano xiddigo ah.
Conte oo ku hogaamiyay Juventus horyaalka markii ugu horeysay ee uu qabto kooxda ayaa xilli ciyaareedkan laga mamnuucay 10 bilood inuu soo fariisto kursiga keydka ka dib markii lagu eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu maamulka isboortiga ku wargeliyo iskuday sharax sharci darro ah oo la doonayay in la sameeyo markii uu tababare u ahaa Siena oo markaas Serie B ku jirtay xilli ciyaareedkii 2010-11.
Siena, Torino, Atalanta iyo Bologna ayaa xilli ciyaareedkan ku bilaaban doona iyadoo dhibco laga jaray madaama ay qeyb ka ahaayeen baaritaankaas iyo maxkamadeynta fadeexada sharadka oo keentay in ciyaaryahano dhowr ah iyagana la ganaaxo.
Xitaa ka hor fadeexadahan wajahay kubada Talyaaniga, waxaa hoos u dhigayay tiro yarida dadka soo xaadirada garoomada oo ay ugu wacneyd qalalaasaha ka dhaca garoomada taasoo keentay in horyaalka Serie A uu dhanka soo jiidashada taageerayaal ka dib dhaco Premier League iyo La Liga.
Waxaan dib u dhacyada wajahay Serie A ay keeneen inay waayaan seddexdii kooxood ee si toos ah u matali jirtay Champions League, waxaana haatan fursadaas ka qaadatay horyaalka Bundesliga. iyadoo Juventus iyo AC Milan ay si toos ah uga qeyb qaadanayaan wareega group-yada halka Udinese ay ciyaareyso Champions League Play offs.
Serie A ayaa sidoo kale weysay qaar ka mid ah xiddigahooda ugu waa weynaa, waxaana ay ku guuldareysteen inay xiddigo kale oo magac leh ku soo bedelaan.
Weeraryahanka AC Milan Zlatan Ibrahimovic iyo daafaca Thiago Silva ayaa ku biiray kooxda taajirka ah ee Paris Saint-Germain, halka xiddigii Napoli ee Ezequiel Lavezzi uu isna aaday isla kooxdaas.
Milan ayaa ku guuldareysatay inay dib ugu soo celiso San Siro xiddigeedii hore Kaka, halka ciyaartoy muddo dheer kooxda joogay sida Alessandro Nesta iyo Gennaro Gattuso ay kooxda ka tageen.
Lakiin weli waxaa jira rajo ah in Serie A ay si fiican uga soo adeeganayaan South America oo ay ka keenayaan ciyaaryahano da’ yar, sida Parma oo soo iibsatay xiddiga Colombia Dorlan Pabon, iyo Palermo oo la soo wareegtay xiddiga Argentina Paulo Dybala, iyadoo madaxweynaha kooxda uu ku tilmaamay inuu yahay Sergio Aguero-ha cusub.
Lakiin uma dhawa waqtigii hore oo xiddigaha ugu waa weyn caalamka ay ka soo baxayeen horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga
Kooxaha Talyaaniga iyaga gudahooda ayaa hataan iska adeeganaya, iyadoo tii u danbeysay ay aheyd markii labada kooxood ee AC Milan iyo Inter Milan ay isweydaarsadeen Antonio Cassano iyo Gianpaolo Pazzini.
AC Milan waxa ay sidoo kale soo iibsatay kubadsameeyihii Fiorentina Riccardo Montolivo, kaasoo si ad ah uga dhex muuqday ciyaarihii Euro 2012.
Juve ayaa Udinese kala soo wareegtay labada ciyaaryahan Maurico Isla iyo Kwadmo Asamoah, iyagoo sidoo kale dib u la soo saxiixday Sebastian Giovinco.
Halka Inter iyo Roma ay iyaga laftooda si fiican uga muuqdeen suuqa kala iibsiga, inkastoo aysan soo xerogelinin xiddigo waa weyn oo magac leh sidii hore looga bartay.
Juventus oo kulankooda ugu horeeya caawa la ciyaaraya Parma ayaa u muuqata inay ugu cadcad yihiin difaacashada horyaalka, islamarkaana Conte waxa uu weli tababar u sameyn karaa kooxda marka ay joogaan garoonkooda tababarka.
Lakiin waxa ay ku xiran tahay sida ay u buuxiyaan booskiisa marka uu ka maqan yahay kursiga keydka maalmaha ay ciyaarayaan.